कलाकारले पैसाको लोभमा आफ्ना आदर्श दाउमा राख्नु कत्तिको जायज हो ? | Ratopati
personरातोपाटी exploreभारत access_timeमाघ ९, २०७६ chat_bubble_outline0
सन् २०१८ सेप्टेम्बरमा नवाजुद्दीन सिद्दीकी नन्दिता दास निर्देशित फिल्म ‘मन्टो’मा सआदत हसन मन्टो बने । ठीक पाँच महिनापछि उनी बाल ठाकरेको भूमिकामा देखिए ।
सलाम यसका पछाडि लोभ र डरको भूमिका देख्छन् ।
‘तानाजी द अनसंग वारियर’ फिल्ममा उदयभान राठौरको भूमिकामा सैफ अली खान सहमत थिएनन् । तर पनि उनले यो भूमिका निभाए । यो कुरा उनी आफैले भनेका हुन् ।
यति धेरै कुरा थाहा हुदाँहुदै पनि सैफले किन यो भूमिका निभाए त ? सैफले भूमिका छनौटको प्रतिरक्षामा आफूलाई भूमिका निकै आकर्षक लागेको बताएका छन् ।
चर्चित फिल्मकर्मी मुजफ्फर अली भने सैफको तर्कलाइ बेकार मान्छन् । उनी भन्छन् ,‘ जब तपाईलाई फिल्मको राजनीतिक कथ्य बदलिएको छ भन्ने थाहा थियो भने तपाईलाई कसरी भूमिका आकर्षक लाग्यो ? यो त तर्कै भएन । थाहा पाउदाँ पाउदै गतल गर्नुको के मतलब भयो ?’
चर्चित इतिहासकार हरबंस मुखिया भन्छन् ,‘कुनै पनि शासकलाई हामी कसरी धर्मको चश्माले हेर्न सक्छौं ? अकबरको जमानामा सबैभन्दा खास राजा मान सिंह थिए । औरंगजेबको जमानामा राजा जयवन्त सिंह र जय सिंह सबैभन्दा खास रहे । मराठामा पनि धेरै महत्वपूर्ण राजा थिए । मध्यकालमा कुनै मुस्लिम शासन थिएन, मुसलमान शासक थियो । तिनको राज्यमा हिन्दू पनि महत्वपूर्ण पदमा रहन्थे । फिल्म बजारमुखी हुन सक्छ तर यसमा इतिहासलाई बजारवादी बनाइन हुदैन ।’
‘भारतमा सरकार वा राजनीतिक ध्रुवीकरण हेरेर फिल्म बनाइन्छ । कंग्रेसको सरकारमा हिन्दू मुसलमान प्रेममा आधारित ‘जोधा–अकबर’ फिल्म बन्यो । अहिलेको सरकार उग्र हिन्दू राष्ट्रवादी छ र ‘तानाजी’जस्तो फिल्म बनिरहेको छ । यहाँ सत्तालाई खुसी बनाउन फिल्म बनाउने परम्परा बसेको छ । अहिले भाजपा शासित राज्यमा तानाजीले करमुक्त गरिएको किन गरिएको छ त ?’ हरबंस मुखियाले भने ।